Iindaba -Izibuko zelanga eziphambili zeNkulumbuso, iidyasi, iiteki kunye nezinye iimpahla zempahla
Iiglasi zokukhanya eziluhlaza eziluhlaza
Clip kwiiglasi zelanga
Iifashoni zelanga zefashoni
Ukukhuthaza izibuko zelanga
Ezona zibuko zelanga ziNkulumbuso, iidyasi, iiteki kunye nezinye iimpahla zokunxiba (i-2020): Imfashini yokuqala kunye nokonga iimpahla okuxelwe liQela loRhwebo
Umnyhadala weGolide ophakamileyo we-2020 wamadoda nabafazi, iimpahla kunye nezihlangu urhwebo, kubandakanya iidyasi eziphezulu, iiteki, iiglasi zelanga kunye nezaphulelo kwimpahla, izihlangu kunye nezinto zokusebenza
Fumana ezona mpahla zintle zakudala, iimpahla kunye nezihlangu kwiAmazon Prime Day, ebandakanya iiteki ezithandwa kakhulu, izihlangu ezibalekayo, iilokhwe, iidyasi, ijezi, kunye nezibuko zelanga. Amakhonkco kwizivumelwano ezithandwayo zidweliswe apha ngezantsi.
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-58 kwimpahla yangaphandle yamadoda, iidyasi kunye neebhatyi ezivela kwiimpawu eziphezulu kubandakanya uCalvin Klein, Ubuso obuMantla, iCarhartt kunye ne-Columbia kwintengiso ye-Amazon Prime Day
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-42 kwiidyasi zabasetyhini, iidyasi, iidyasi kunye neebhatyi zepea ezivela kwiimpawu eziphezulu ezinje nge-North Face, Steve Madden, Columbia kunye noCalvin Klein kwiAmazon Prime Day promotion
Gcina iipesenti ezingama-42 kwi-Columbia Women's Arcadia II Jacket kwiAmazon-Shell ibhatyi ephezulu enefestile ehlengahlengiswayo, umtya wokuguqula umtya kunye nebhegi enezipper
Thenga ibhatyi yemvula yeGlennaker yaseColumbia eAmazon kwaye ugcine ukuya kuthi ga kuma-43% -igobolondo lenylon engenamanzi yomelele kwaye iyakwazi ukumelana nemvula elula ukuya kwimvula
Gcina iipesenti ezingama-41 kwibhokisi yamadoda yase-Colombian's Ascender Softshell kwiAmazon engenamanzi kunye nomoya u-Andean wenziwe nge-100% ipholiyesta
Gcina i-30 yeedola kwi-Eddie Bauer UNks. Sun Valley Down Parka kwiAmazon eyenziwe nge-650 ezaliswe yipremiyamu ezantsi kunye neepokotho zoboya
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-47 kwi-Columbia Women's Foldback Waterproof kunye ne-rainproof Jacket-Nylon yoyilo yegobolondo ikugcina womile kwaye ukhuselekile nakwimvula
Thenga iRay-Ban flat lens lens oval Sungles kwaye ugcine i-20% kwiAmazon-enesakhelo sesinyithi kunye nokhuseleko lwe-UV
Thenga iRay-Ban yabasetyhini iBlaze Round Sunglass kwiAmazon kwaye ugcine iipesenti ezingama-30 ngesakhelo seplastikhi kunye nokhuseleko lwe-UV
Gcina iipesenti ezingama-50 kwizibuko zelanga zikaRay-Ban Blaze Wayfarer kwiAmazon-yenye yezona meko zibalaseleyo kwiphothifoliyo kaRay-ban
Thenga iRay-Ban Blaze Double Bridge Square Sunglass eAmazon kwaye ugcine iipesenti ezingama-47% -nesakhelo sesitayile esenziwe ngesitayile esineeflethi neziphindwe kabini
Gcina iipesenti ezingama-26 kwiiOlley zeHolbrook Square Sunglass kwiAmazon-ezingapheliyo zoyilo zakudala ezibandakanya itekhnoloji ye-Oakley yale mihla
Thenga i-Oakley Men's Flak 2.0 izibuko zelanga ezixande kwiAmazon kwaye ugcine i-32% -ifreyimu enganyangekiyo yoxinzelelo ayikhaphukhaphu kwaye yomelele, ikhululekile kwaye iyakhusela imini yonke
Gcina i-73 yeedola kwi-Oakley Men's Valve Rectangular Sunglass kwiAmazon-ivelufa sisakhelo esinganyangekiyo koxinzelelo, esilula kwaye somelele, kwaye sikhululekile ukunxiba imini yonke
Thenga i-Oakley Men's Flight Jacket Rectangular Sunglass kwiAmazon kwaye ugcine ama-21% -ukubonelela nge-100% ukhuselo lwe-UV kuzo zonke i-UVA, i-UVB, i-UVC kunye nokukhanya okuyingozi okwesibhakabhaka, ukuya kuthi ga kwi-400mm
Thenga iiglasi zelanga zeOakley Split Time Metal Pilot kwiAmazon kwaye ugcine iipesenti ezingama-25 -ukubonelela ngamandla kunye nokuguquguquka ukumelana nokutshintsha okanye ukujika
Gcina $ 81 kwii-Oakley Men's Mainlink Rectangular Sunglass kwiAmazon-eyenzelwe iimeko ezikhanyayo, esenza imeko-bume ibonakale icacile kwaye iyindalo
Gcina ukuya kuthi ga kwi-44% kwi-Nike, Adidas, iBhalansi eNtsha, i-ASICS kunye ne-Skechers sneaker kwintengiso yeAmazon Day Day
Gcina ukuya kuthi ga kwi-38% kwizihlangu zamabhinqa, iimbadada, izithende eziphakamileyo kunye nezihlangu ezisicaba kwiAmazon Prime Day yokunyusa-cofa kwikhonkco ukuze ufumane amaxabiso akutshanje kwizihlangu zabasetyhini, ukusuka kwezihlangu zokuhamba ukuya kwizonka kunye nezonka
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-43 kwizihlangu zabantwana kwiAmazon Prime Day ukunyusa-gcina iiteki, iibhutsi, iimbadada kunye neziteki zamakhwenkwe namantombazana
Thenga i-crossover sneaker yamadoda amatsha kwiAmazon, gcina i-22% -100% yesikhumba, yonke into ejikelezayo
Thenga i-New Balance Women Fuelcore Nergize V1 sneakers eAmazon, gcina i-38% -100% yokwenziwa kwefayibha, inkxaso yoyilo lwesitayile
Gcina iipesenti ezingama-26 kwiiSkechers zamadoda eDelson Camben Sneakers kwiAmazon-engatyibilikiyo, imitya yangaphambili, ezemidlalo kunye noyilo lokuzonwabisa
Gcina kwii-ASICS zamadoda zeGel-Venture Jogging Shoes kwiiAmazon-zePrimiyamu insoles ezinokomelela okuphezulu kunye nolawulo olugqwesileyo lokufuma
Thenga i-Skechers Ladies Go Joy Walking Shoes eAmazon kwaye ugcine i-40%-ukukhanya kunye nokuguquguquka okuphendulayo kwe-5Gen
Gcina iipesenti ezingama-43 kwiDeer Stags Boys Oxford Shoes kwiAmazon-Soft, ulwelo oluqinileyo kunye noyilo lwamaphiko
Gcina i-44% kwi-Fila Women's Disruptor II sneakers kwiAmazon eyenziwe ngesikhumba seprimiyamu kunye nokukhanya okulula
Gcina kuma-ASICS amanenekazi e-gel izihlangu ze-adventure kwi-Amazon-ethembekileyo ye-GEL-Venture® 7 eqhuba inkxaso yezihlangu iya kukunika izibonelelo ozifunayo kugqatso ngalunye
Gcina i-28% kwi-Skechers Afterburn kwi-nylon evaliweyo kunye nesitayile yokuvalwa kwentambo yokuvalwa kunye nekhola yesithende kunye nolwimi ukuze ufumane intuthuzelo engaphezulu
Thenga i-Reebok ladies 'classic Harman Run sneakers eAmazon kwaye ugcine i-23% -izitayile ezinesitayile nge-EVA midsole zibonelela ngenkxaso kwaye zinokuhlala zizihlandlo ezininzi kunye nokubaleka
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 kwiSteve Madden's Fenta fashion sneakers kwiAmazon-lace-up "iiteki ezingaqhelekanga" ezineentambo zerabha, ezifumaneka ngemibala emi-5 yakudala
Thenga i-PUMA yabasetyhini uCarina Sneakers kwiAmazon kwaye ugcine ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-42% -ezenziwe ngesihlangu ezenziwe nge-100% yesikhumba esenziwe ngeentambo zerabha
Thenga iBhalansi eNtsha yaBasetyhini ye-608V5 yeCustoms eQhelekileyo yoQeqeshiso soQeqesho kwiAmazon kwaye ugcine ukuya kuthi ga kuma-31% -ezona zihlangu zikhululekileyo zoqeqesho kunye nokujikeleza yonke indawo
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-32 kwiiSkechers Work Cessnock sneakers kwiAmazon-enemingxuma ephefumlayo kunye namabhanti e-bungee kunye nerabha engatyibilikiyo
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-43 kwiReebok yamadoda imfashini yeklasikhi yezambatho kwiAmazon-yeediliya yesikhumba yesitayile kunye nokudityaniswa kwerabha emhlophe kunye nombala weentsini
Thenga phantsi kweArmor Kids 'PreSchool Assert I-8 enye yokuVala iiteki eAmazon kwaye ugcine ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 kubunzima obunzima kwaye bekhululekile, ngentambo yokuloba kunye nelophu, kulula ukuyibeka kwaye uyikhuphe
Gcina ukuya kuthi ga kwi-34% kwimpahla yamadoda nakwimfashini kwiAmazon Day Day yokunyusa-jonga izivumelwano zamva nje kwiihempe zamadoda, ijezi, iidyasi, iidyasi, ijini, ibhulukhwe, iibhulukhwe ezimfutshane, iimpahla zangaphantsi kunye nezemidlalo
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-40 kwimpahla yabasetyhini nakwifashoni kwiAmazon Prime Day yokunyusa-cofa kwikhonkco ukuze ufumane ulwazi lwamva malunga neetop zabasetyhini, iijezi, iidyasi, iibhatyi, iilokhwe, ijean, ibhulukhwe, iziketi, iitrakhwe, iimpahla zemidlalo, iimpahla zangaphantsi, ukulala kunye nempahla Isaphulelo ukunxiba nje
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-58 kwimpahla yabantwana kwiAmazon Prime Day yokwazisa-gcina iidyasi, iimpahla zemidlalo, iipijama kunye nempahla yangaphantsi yamakhwenkwe namantombazana
Thenga i-Wrangler Authentics's Men's Comfort Flex Waist Waist uJean kwiAmazon kwaye ugcine i-20% -arhoqo ngentambo ye-denim elula
Yonwabela isaphulelo sama-35% kwisisombululo sabasetyhini sedemokhrasi kwiAmazon-6 izitayile zepokotho kwiipremiyamu zodidi oluphezulu lweetayitile
Thenga iCalvin Klein yabasetyhini iCotton Bralette kwiAmazon kwaye ugcine ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-41%
Thenga amabhinqa amnyama aphakame kakhulu eLevi kwi-Amazon kwaye ugcine i-40% -hlala ngaphezulu kwesinqe kwaye unciphise ezantsi esinqeni nasemathangeni
Gcina ukuya kuthi ga kuma-51% ngokuthenga intshatsheli yamadoda ijezi yeklasikhi ye-T-shirt eAmazon-kunye ne iconic C patch kumkhono wasekhohlo
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-33 kwiLeans's Women's Classic Bootcut Jeans kwiAmazon- hlala esinqeni kwaye udlule ngokulula esinqeni nasemathangeni
Gcina ukuya kuthi ga kwi-41% kwi-Suede jogger sweatpants yamadoda kwi-Amazon-uboya ubekwa ityala ngaphandle kwaye uthambe kakhulu ngaphakathi
Thenga ihempe yokuthinta ulwelo lwamadoda kaCalvin Klein eAmazon ukugcina ukuya kuthi ga kwi-62% -ikukhusela i-UV kwaye iphothwe ngentambo ecekeceke ukubonelela ngokungenisa umoya nokuphefumla
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-52 kwiNkokheli yeAmazon yePowerblend yeNkwenkwana yeCrew-V-yeenkcukacha zentamo kwi-neckline kunye nemikhono ye-raglan enemikhono
Ngaba ujonga izihlangu ezithandwayo kunye nezifunwayo, iimpahla kunye nokunikezelwa kwefashoni? Cofa apha ukukhangela zonke iinketho zentengiselwano kwiphepha leAmazon le “Prime Day”.
Ukunyuselwa kukaSuku lweGolide kuhlala kuphela ixesha elimiselweyo. I-Retail Egg ifumana iikhomishini ngokuthenga okwenziwe kusetyenziswa ikhonkco elinikiweyo.
Umnyhadala wokuthenga we-Prime Day wonyaka weAmazon uhlala iiyure ezingama-48, ukubonelela ngokonga okubonakalayo kumawakawaka eempawu eziphambili.
Awunamalungu eNkulumbuso eAmazon? Qala uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30 ngoku kwaye uthathe ithuba lokukhuthazwa kwe-Prime Day.
Ungonga imali eninzi ngexesha leNkulumbuso, ezinje ngeebhatyi, iimpahla zasehlotyeni, ii-top kunye nee-T-shirts, iiteki ezinemfashini, iiteki kunye nezixhobo (ezinje ngeewotshi kunye nezibuko zelanga). Nokuba ufuna izihlangu, iimpahla okanye iiglasi, iAmazon inokuphantse ikhawulelane neemfuno zakho. Kudidi lwefashoni yabasetyhini, uya kufumana iimpahla ezahlukeneyo, izihlangu kunye nezinto zoncedo. I-SL Fashions kunye ne-BTBFM zezinye zeemveliso ezininzi ezinikezela ngeengubo ezahlukeneyo kwizihlandlo ezahlukeneyo. Umzekelo, ii-tuxedos ze-SL Fashions zilungele amaqela aqhelekileyo, amaqela e-ofisi, amatheko e-cocktail, imitshato, njl. Njl. Nazo zinikezelwa njengezibuko zelanga, iibhegi kunye neewotshi.
Kwisebe lefashoni yamadoda, uya kufumana kwakhona iindlela ezahlukeneyo ezinxitywayo, ubucwebe, izihlangu kunye nezixhobo. Ukusuka kwiiteki ukuya kwiibhutsi, isonka esityhutyha iimbadada, wonke umntu unazo. Ukuba ufuna iiteki ezikumgangatho ophezulu, ke iAdidas, iLacoste, iSperry kunye noTommy Hilfiger zezinye zazo. I-Adidas yeNkundla eNkulu yamadoda amateki anobuhle beklasikhi be-adidas, ibenza babe bhetyebhetye.
IAmazon ibibambe owona msitho mkhulu wokuthenga ukuza kuthi ga ngoku nge-Prime Day kunyaka ophelileyo. Amalungu eNkulumbuso angonwabela ngaphezulu kwezaphulelo ezizodwa.
Ngaba ufuna ngaphezulu kweempahla zamadoda nabasetyhini, izihlangu kunye nempahla yefashoni? Cofa apha ukukhangela lonke ukhetho lwentengiso kwi-Amazon's "Prime Day" kwiphepha lokunyusa.
Malunga neRetail Egg: I-Retail Egg yabelana ngeendaba malunga nokuthengiselana nge-e. Njengelungu le-Egg Retail Associate Retail, unokufumana umvuzo ngokuthenga okufanelekileyo. Nxibelelana: Andy Mathews (andy@nicelynetwork.com)
Umgcini zimali waseSan Francisco uxoxe ngokubaluleka kolawulo lweBiden kwiiphothifoliyo zotyalo-mali kwincoko nganye nabathengi.
Abasebenzisi abangakhange babeke iodolo kulo naliphi na iqonga le-JD banokufumana amakhuphoni esaphulelo! Ngekhadi lakho leVisa, cofa uhlawule ku-JD.com okokuqala kwaye wonwabe ngezaphulelo!
Inkampani ithi u-Lee Kun-hee, owakha i-Samsung Electronics kwisigebenga sehlabathi kwii-smartphones, iisemiconductors nakwiTV, usweleke ngeCawe emva kokulaliswa esibhedlele iminyaka engaphezulu kwesithandathu ngenxa yesifo sentliziyo ngeCawa. U-Lee uneminyaka engama-78 kulo nyaka. Uphuhlise iQela leSamsung laba lelona lizwe likhulu eMzantsi Korea kwaye waba yindoda esisityebi eMzantsi Korea. UJeong Sun-, uCEO wenkampani yophando yenkampani uChaebul.com, uthe: “Ukonyuka okumangalisayo kukaLee eKorea kunye nendlela uMzantsi Korea odibana ngayo kubumbano lwehlabathi kungumfuziselo wokuba ukufa kwakhe kuyakukhunjulwa ngabantu abaninzi baseKorea.
UHarry Markopolos (uHarry Markopolos), owayesakuba ngumqeqeshi ophuma kubuchwephesha bezemali, wafumanisa i-65 yezigidigidi zeerandi ze-Bernie Madoff Ponzi, kodwa wahoywa yi-SEC kangangeminyaka esithoba. Njengomgxeki othetha phandle wabalawuli baseMelika, ngoku uHarry ujonga icandelo lokuphicothwa kunye nomzi mveliso weinshurensi njengelona tyala lokukhwabanisa lilandelayo.
Ngekhadi leVisa, ungonwabela ukuya kuthi ga kwi-20% isaphulelo ngokuthenga kwiVenkile yeVenkile yeHlabathi! Jonga unyuselo lwamva nje lwevenkile ezikwi-intanethi ezinje ngeMytheresa kunye neGiglio.com!
IMicrosoft, Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, AMD, Caterpillar, Comcast, GE, Ford, Pfixer, Visa, UPS, Exxon Mobil, Twitter nezinye iinkampani zichaze iziphumo zekota yesithathu.
Kulula ukuthenga izitokhwe, kodwa kunzima ukuthenga isitokhwe esifanelekileyo ngaphandle kwesicwangciso esivivinywe ixesha. Ke yeyiphi eyona stock ilungileyo yokuthenga okanye ukubeka kuluhlu lokubukela ngoku?
Imarike yemasheya inokuhamba neenkokheli ezinje ngeMicrosoft kunye neTesla. Ngonyulo olusondeleyo kwaye iimeko ze-coronavirus zanda, le yayiyeyona veki inengeniso iphezulu.
Nikela ngokukhawuleza ukuxhasa iarhente yeembacu yeUN, ukuze iimbacu zifumane izixhobo ezingxamisekileyo zokujongana nexesha lemvula kwaye zibasindise kwintlekele!
Sisiphi isicwangciso-qhinga sotyalo-mali esime uvavanyo lwexesha? Utyalomali lokukhula. Iingcali zeWall Street zikholelwa ukuba amasheya anethemba lokukhula okugqithileyo abonisa ezinye zezona ndawo zinamandla. Amandla okukhula angaphaya kwenqanaba elikhawulezileyo, kwaye la magama aya kuzuza imbuyekezo ebonakalayo ngo-2020 nangaphaya. Oko utshilo, ukutsho okuncinci, ukufumana amasheya awela kolu luhlu kunokuba ngumceli mngeni. Abahlalutyi bakholelwa ukuba isicwangciso-qhinga esinye kukuthatha inyathelo ukubuyela umva, ukujonga umfanekiso omkhulu, kwaye kugxilwe kwiinkampani ezinokukhula kwexesha elide ngokusekwe kwimpumelelo enomtsalane yanamhlanje. Ukugcina oku engqondweni, sisebenzise isiseko sedatha seTipRanks ukuchonga izitokhwe ezintathu zokukhula ezazilinganiswe kakhulu ngabahlalutyi. Zontathu ezi sitokhwe zifezekise ukukhula okukhulu ngo-2020 kwaye zikulungele ukuqhubeka nokunyuka. Inkampani yeSizwe yasePennsylvania (PENN) Okokuqala, sinenkampani yePennsylvania National Game, ephethe kwaye isebenza ngokudlala kunye nezixhobo zokubaleka kunye neshishini lomdlalo wevidiyo eUnited States. Igama liye lenyuka nge-146% ngonyaka, kodwa abanye abahlalutyi baseWall Street bakholelwa ukuba kusekho amafutha amaninzi etankini. IPENN kutsha nje ibhengeze iziphumo zayo zekota yesithathu kwangaphambili, ezigqithile kulindelo. Inkampani ilindele ukuba imida yenzuzo kwikota inyuke ngaphezulu kwama-900 amanqaku, kwaye i-EBITDAR ehlengahlengisiweyo iya kukhula nge-5% ngonyaka, nokuba ingeniso yehle nge-10% ngonyaka. Umhlalutyi weenkwenkwezi ezintlanu uJoseph Greff uxelele abathengi ukuba "uJP Morgan Chase" uthe: "Ukuvuselelwa kweshishini lokudlala kwimimandla ngoMeyi / Juni kuqhubeke kwade kwaba yikota yesithathu, kwaye ingeniso ibingcono kunokuba bekulindelwe. Nje ukuba ibango licinezelwe Emva kokubuyela esiqhelweni, kwaye ukusukela ukuba ukusebenza kwe-COVID yangaphambili kuphuculwe, iindleko zokusebenza azenzanga / azinyukanga. Ngaphambili besicinga ukuba izinga lokukhula linciphisiwe. ” Ukutshilo oko, uGreif uvumile ukuba ngenxa yokusebenza kwexabiso lesitokhwe elivelileyo, abanye abahlalutyi bakushiye ngasemva oko ”. Nangona kunjalo, usakholelwa ukuba "ixabiso kunye ne-catalyst yexesha elizayo". Abahlalutyi bagqabaze bathi: “… Kukho umlo wemfazwe kutyalo mali. Siyakholelwa ukuba oku kunempilo kwistokhwe kwaye phantse kufanelekile ukuba amasheya aqhubeke nokunyuka; Siyakholelwa ukuba abatyali mali bemidlalo yeshishini lokulingana abangaxhatshazwa ngokupheleleyo. Siyakholelwa ukuba abatyali mali bayathandabuza malunga namandla e-PENN okukhuphisana nee-DraftKings, i-Fanduel, i-Caesars Entertainment, i-MGM / i-GVC, njl.njl. Ukuqokelela imali kuqokelele i-950 yezigidi zeedola, umngcipheko wolu khuphiswano uncitshisiwe ngokoluhlu olunentsingiselo. ” Okona kubaluleke kakhulu, i-PENN kutshanje iphehlelele i-Barstool Sports ukubheja usetyenziso ePennsylvania. U-Greff ubize ukukhutshwa kwangoko "kukhuthaza ngokwexabiso lomthamo kunye nenkcitho yentengiso," kwaye kwangqina "ukuba kunokwenzeka ngendlela ekhethekileyo yokufumana isabelo." Ukongeza, amandla eBarstool Sportsbook ayanda. Okubaluleke ngakumbi kukuba, uGreff ukholelwa ekubeni ukubheja kwezemidlalo kunye nokusingqongileyo kwe-iGaming kuyafana nokunyuka kweemarike zommandla kwiminyaka yoo-1990, xa ilizwe elinengxaki yokusilela kuhlahlo-lwabiwo mali luye kwimithombo emitsha yengeniso, enje ngemidlalo yezikhephe ukunceda ekuhlawuleni uhlahlo-lwabiwo mali. intsilelo. Kule meko, umhlalutyi uthe: “Siyakholelwa ukuba urhulumente ngamnye uphantse walindela okufanayo kwi-USSB nakwi-iGaming, kwaye iPENN iyakuba ngomnye wabaphumeleleyo. Sithanda umdlalo osekwe kumhlaba / ukubheja kwezemidlalo / ipatheni yeGaming e-US kwaye sibona indawo yokukhula. . ” Ewe ayothusi into yokuba ingcwaba lahlala neeBulls. Ukongeza ekunikezeleni "ukutyeba", usete ixabiso le- $ 83 kwistokhwe. Ukuba le njongo ifezekisiwe kwinyanga ezilishumi elinesibini ezizayo, abatyali mali banokufumana imbuyekezo engama-32%. (Ukujonga irekhodi lomkhondo kaGreif, cofa apha.) Ithini enye iWall Street? Kuthengwe izinto ezithoba, ukugcinwa okuthathu kunye nentengiso enye kukhutshwe kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Ngenxa yoko, i-PENN ifumene "ukuthengwa okuphakathi" ukuvumelana. Ngokusekwe kwi-avareji yexabiso ekujoliswe kulo le- $ 76.77, ixabiso lesitokhwe linokunyuka nge-22% kunyaka olandelayo. (Jonga uhlalutyo lwesitokhwe sePenn National Gaming kwiTipRanks.) I-Redfin (i-RDFN) iRedfin iqalile ngemephu esekwe kwindawo yokukhangela kwaye yandisa uluhlu lwemveliso yayo ukwenza imidlalo yosapho, ukungcola kunye neenkqubo zokubamba ngokukhawuleza nangokulula. KwiWall Street, abanye abantu bacinga ukuba eli gama alikho nje malunga nokunyuka kwemfuno ye-COVID, kwaye i-113% yayo yokufumana unyaka ukuza kuthi ga ngoku sisiqalo nje. Nangona i-RDFN isusile uqikelelo lwekota yesithathu olomeleleyo, abatyali mali baphoxekile sisiphumo. UJake Fuller we-BTIG uchaze ukuba ixabiso lesitokhwe lingahla kuba “ulindelo luphezulu kwaye ukonyuka okumodareyitha kwinqanaba lemali emalunga neepesenti ezi-2” kwaye “abatyali zimali abathanda ukunyusa isingqi esikhokelwa ngumthamo, ngelixa i-RDFN isalele ngasemva kolu lindelo.” U-Fuller ukholelwa ukuba i-RDFN ayingombono woqwalaselo lwabantu abaninzi, nto leyo ebonisa ukuba abatyali-mali kungenzeka ukuba ababonanga kubhengezwa ngengeniso. Nangona kunjalo, ucinga ukuba iWall Street inokuphosa eyona ndawo iphambili iphazili. Umhlalutyi weenkwenkwezi ezintlanu wathi: "Into enokungahoywa apha kukuba i-RDFN inyuse izinga lekhomishini ngaphandle kwefuthe elibonakalayo kumgangatho wokuguqulwa, nto leyo eya kuthi inyuse imbonakalo yenzuzo epheleleyo ye-RDFN." Ukuza kuthi ga ngoku, uya kuthi I-2021 yenzuzo epheleleyo kulindeleke ukuba inyuke nge-47%. Ukujonga ngokusondeleyo kulwazi oluneenkcukacha zekota, i-RDFN ifumene imfuno enamandla kunye neenkonzo zokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba zikhule nge-36% unyaka nonyaka. Ukugcwala kwiwebhusayithi kunye nevolumu yokuthengiselana nayo inyuse inyanga nenyanga. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba inyani iqhutywa yingeniso yentengiselwano nganye. UFuller uthe: “Oku kubalulekile kuba kubonisa ukuba izinga lekhomishini elilindelweyo liya kuthi ekugqibeleni libe negalelo.” “Ngokwezibalo zethu, iinkonzo zorhwebo ngeniso ezivela kwi-1.68% ye-GTV kwikota yesithathu ka-2019 nakwikota yesibini ka-2020 1.78% inyuke yaqikelelwa kwi-1.85% kwikota yesithathu yowama-2020. ukugcwala kwabantu abaninzi kule ndawo. Nangona kunzima ukuvavanya ukuzingisa kwebango, ukonyuka kwamaxabiso kunye nemida yenzuzo engcono kufuneka igcineke ”utshilo uFowler. Ngokuhambelana nethemba lakhe, u-Fuller uxhase iinkunzi zeenkomo, ephinda ixabiso lokuthenga kunye nexabiso lesitokhwe le- $ 65. Le njongo ibonisa ukuzithemba kwakhe kumandla e-RDFN okunyusa nge-45% kunyaka olandelayo. (Ukujonga irekhodi lengoma kaFuller, cofa apha.) Xa usiya kwezinye iinxalenye zeWall Street, izimvo zahlulwe ngakumbi. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, ii-buys ezi-6, ezi-5 zibanjiwe kunye ne-1 ethengisiweyo zabelwe. Ngokwe-Wall Street, i-RDFN kukuthenga okuphakathi. Ixabiso ekujoliswe kulo le- $ 50 lithetha i-11% ngaphezulu. (Jonga uhlalutyo lwesitokhwe seRedfin kwiTipRanks) iVertiv Holdings (VRT) Njengenye yezixhobo eziphambili zehlabathi, isoftware kunye nabanikezeli beenkonzo, iVertiv Holdings incedisile ukukhuthaza imarike edibeneyo yeenkqubo zedijithali, apho inani elikhulu elibalulekileyo Idatha kufuneka ingadluliselwa, ihlalutywe, yenziwe kwaye igcinwe. Isitalato iWall sithe sinyuke nge-71% ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, kwaye kunokuba nokubakho ngaphezulu. Nokuba ixabiso lesitokhwe linyuka kakhulu, umhlalutyi woPhando lweWolfe uNigel Coe usakholelwa ekubeni imeko yomngcipheko / yomvuzo ilungile. Ucacisile wathi: "Sikholelwa ekubeni iVertiv luhlobo olunqabileyo olunokutsala uluhlu olubanzi lwabatyali mali: inkampani yokukhula enomgangatho ophakathi enokubonelela ngokukhula kwenzuzo enomtsalane ngesaphulelo kwaye iphantsi koxanduva lweqela elilawulayo eliphezulu." Xa kufikwa kwiVRT Endleleni eya ekukhuleni, ezona ntengiso zazo ziphambili ngamaziko edatha kunye nonxibelelwano ngomnxeba. Ezi ndawo ziindawo apho uCoe alindele ukufikelela kuphuhliso ngo-2020 nango-2021, kunye nokusilela kwexesha elide okuziswa kukwanda okuqhubekayo kwedatha kunye nokuphuculwa kwe5G. Ukongeza, eqhutywa yimizamo yokugcina iindleko ezizinzileyo rhoqo ngohlaziyo lwezinto ezahlukeneyo kunye nokunciphisa ukuntsonkotha kombutho, abaphathi bachaze indlela yokwandisa inzuzo ukuya kumanqaku asisiseko angama-500. "Esi sisicatshulwa esithunyelwe ngempumelelo ngusihlalo olawulayo uDavid Cote ngexesha lokuhlala kwakhe eHoneywell, okusenza siqiniseke ukuba amaphepha afanayo anokuthunyelwa eVertiv," utshilo uCohen. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-VRT irhoxile kwikota yesibini ye-2020, enetyala elimalunga ne-US $ 2.1 yezigidigidi kunye netyala elipheleleyo / i-EBITDA efikelela kumaxesha e-4.2. Nokuba sele liphezulu kolu luhlu, uCoe ukholelwa ukuba i-balance sheet inokucima ngokukhawuleza. Ukuza kuthi ga ngoku, uthatha ukuba nge-2023 ityala elipheleleyo / umyinge we-EBITDA uphindwe kabini, imali eyinkunzi eseleyo iya kufikelela kwi-1 yezigidigidi zeedola zaseMelika. "Okwangoku asiyicingi into yokuba iVertiv libali elicacileyo lokuhambisa imali, kodwa oku kunokuvela ngexesha elisikiweyo lowama-2022/23-siyakwazi ukubona imisebenzi yokufumana izinto ukuphucula amandla ayo kwicandelo lokuhambisa amandla kunye nocingo lweDCIM. Olunye ukhetho olunokubakho kukuvala ukupheliswa kweziqinisekiso zemali (ezi zinto ngoku zibonisiwe kubalo lwethu lokuhlanjululwa kwesabelo) kunye nendlela ezabiwa ngayo izabelo, eziza kwandisa ukubanakho kobunini beziko. Asinakuyityeshela inyani yokuba izixhobo zombane ezikhulu. Yonke into eyenziweyo yiVRT yenze ukuba uCoe aphinda-phinde inqanaba lakhe langaphandle. Ngelixa ubiza ukhetho, wabeka ixabiso ekujolise kulo kwi-23 yeedola, oko kuthetha ukuba i-22% inokujongwa ngaphezulu. (Ukujonga irekhodi lomkhondo kaCoe, cofa apha) Ngaba abanye abahlalutyi bayavuma? bazi. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, kuphela kuphela ii-4 ngqo "zokuthenga" ezithe zapapashwa. Ke ngoko, umyalezo ucacile: i-VRT kukuthenga okunamandla. Ngenxa yokuba ixabiso ekujoliswe kulo li- $ 20.75, ixabiso lesitokhwe linokunyuka nge-10% kunyaka olandelayo. (Jonga uVertiv Holdings uhlalutyo lwesitokhwe kwiTipRanks) Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Izimvo ezichazwe kweli nqaku kuphela zezomhlalutyi ophambili. Umxholo ngowokujonga kuphela. Ngaphambi kokwenza nayiphi na imali, kubaluleke kakhulu ukuba uhlalutye uhlalutyo lwakho.
Ingeniso ephambili yale veki kunye nengxelo yedatha yezoqoqosho iya kukhutshwa kamva kule veki, kwaye uninzi lweempahla zeFAANG zixeliwe emva kokuvalwa ngoLwesine.
Kwiveki ephela ngo-Okthobha i-22, inzala yemali mboleko yehle kwiirekhodi eziphantsi. Kulindeleke ukuba i-COVID-19 kunye nezopolitiko zaseMelika zizoqhubeka ukuba nefuthe kule veki.
Ifomula eyodwa ye-oyile yentlanzi "i-DHA ne-EPA + iSesame Ming E", ii-capsules ezi-4 ngosuku, zinokuphelisa ingxaki ye-cardiovascular, zibuyise ubunzima besibindi, zijulise ukulala, kwaye zibe yingozi yedolophu! I-10% isuswe ixesha elilinganiselweyo, ungaphoswa!
Ingxelo yomvuzo wekota yesithathu ye-AMD (AMD) icwangciselwe ukuba ikhutshwe emva kokuvalwa ngoLwesibini, eli lixesha elinomdla kumzi mveliso we-semiconductor. Ijenali yeWall Street yaxela ukuba i-AMD (AMD) iceba ukwandisa ishishini layo ngokufumana izinto ezinokubakho (XLNX) (XLNX). Kwangelo xesha, okhuphisana naye omkhulu (i-INTC) ebesebenza nzima ukuqhubeka nokuvelisa ubuchwepheshe bokuvelisa obuphambili obufunekayo ekwenzeni ii-semiconductors ezikumgangatho ophezulu.
* Ibali elikwiphepha-ndaba leBarron kule mpelaveki lijonga amathemba ezigebenga ezisisidenge kwihlabathi lasemva kobhubhane. * Amanye amanqaku amanqaku axoxa ngokunyuka kweestokhwe ezikhulayo kunye nalapho unokufumana khona umvuzo. * Ukongeza, kukho amathuba okuba utyalo-mali luthengise izindlu nomhlaba, abo basebenza ezivenkileni, kunye ne-biotechnology yomhlaza. Ibali lika-Andrew Bary elikwincwadi ethi "Kutheni iCoca-Cola izakuvela kwakhona" ibonisa ukuba inkampani eye yasokola kakhulu kulo bhubhane yiCoca-Cola (NYSE: KO). Nangona kunjalo, njengokuba abantu bebuyela esiqhelweni kwilizwe logonyo, ifuthe lehlabathi lesigebenga esikhulu sezizwe ngezizwe linokuyenza inyuke iye kwiindawo eziphakamileyo. UReshma Kapadia's "Ezi ndawo zorhwebo zisakhulayo zingakhuphisana neetekhnoloji zaseMelika", utshilo, emva kweminyaka elishumi yokwehla, izitokhwe zentengiso ezikhulayo ziyenyuka. Iinkampani ezininzi ze-Intanethi kunye nezonyango kwiimarike zaphesheya kwezilwandle zisesendleleni yokukhula, zibonelela ngamathuba amakhulu. Ngaba iAlibaba Group Holdings Limited (NYSE: BABA) kufanelekile ukuyibona? Kwi "Ngxowa mali ezintathu zoNyango lwezoNyango zokuVuna ukubuya kwindawo yezeMpilo", uDarren Fonda (UDarren Fonda) uqinisekisile ukuba iinkampani ezithembela ukuthengisa izindlu nomhlaba ezijolise kumaziko ezempilo zinendawo yokukhula. Fumanisa ukuba yintoni uBarron ayithandayo malunga nePhysical Realty Trust (NYSE: DOC) kunye noontanga bakhe. I-NextEraEnergy Inc. (i-NYSE: NEE) inyuke nge-26% kulo nyaka, ngokwe "8 ukubonelela ngezixhobo ezikhuselekileyo" kunye nokuphuculwa okuqhubekayo kwemveliso ", umbhali: uLawrence · C · Strauss (uLawrence C. Strauss). Kodwa kwenye indawo kwicandelo lezinto ezisetyenziswayo, akukho kunqongophala kokuhla kwemveliso kunye neendlela ezithile zokukhusela. I-Xcel Energy Inc. (i-NYSE: i-XEL) ​​yenye yeenketho zikaBarron. Ku-Eric Savitz's “Musa Ukuziyeka Izinto Ezinkulu Zobuchwephesha. "Iinkxalabo ziyabaxwa", kutheni kufunyaniswe ukuba nokuba urhano luye lwaphakanyiswa phantsi kophononongo lomthetho olungqongqo, izizathu zisese-Apple (NASDAQ: AAPL) kunye neMicrosoft (NASDAQ: MSFT)) Iinkampani bezisungula kwaye zisenza, endaweni yoko kunokukhohlisa nokuxhaphaza. Bona kwakho: Imarike yenkomo ye-Benzinga yeveki: iBoeing, iNetflix, iPfizer, njl. UJack Hough wakhankanya "Ukufuna iholide yokuthenga i-fakes", kuxoxwe ngokuba kutheni uNovemba ingalixesha elifanelekileyo lokuthengisa ilahleko zerhafu, ezinje ngeKohl's Corp. (NYSE: KSS) kunye neMacy's Inc. (NYSE: M). I-Nike (NYSE: NKE)? Kuqala, iMarike yamaFama amaFama (i-NASDAQ: i-SFM) yayiye yaphumelela i-COVID-19, emva koko yaphulukana ne-COVID-19. Ke ngoko, iTresa Rivas's "Sprout Inventory ilungele ukubuyela okuhle." Emva kokuphulukana phantse nekota yexabiso kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, ngaba umthengisi wevenkile enkulu esekwe ePhoenix kulindeleke ukuba ahlawule? Kwi "nethemba malunga neTesla, telemedicine kunye ne-genomics revolution" Ku, uEmily Liu wabelana ngokuba kutheni utyalo-mali lwe-CEO ye-ARK ingumfundi wezinto eziphazamisayo, kutheni uTesla (NASDAQ: TSLA) eza kushiya i-Uber Technologies Inc. uhlala nabanye. “Ingqungquthela Yomhlaza Ingazibamba Ezi Zitokhwe zeBiotech.” Kwingqungquthela ye-ENA yalo nyaka, abaphandi bomhlaza babambe intlanganiso kwi-Intanethi ukujonga idatha entsha kumachiza kuvavanywa ziinkampani ezininzi zebhayoloji. Ulwazi malunga nenkampani Mirati Therapeutics, Inc., izabelo zokutshintshana Mirati Therapeutics Inc. (NASDAQ: MRTX) namhlanje. Kule veki iBarron ngeveki: * Uza kuhlawula malini ngokweBiden kunye neTrump yesicwangciso serhafu Inkcitho * Isicwangciso serhafu somgqatswa sika-Mongameli siza kunceda-kwaye senzakalise uqoqosho-into enokutshiwo ngumtshangatshangiso kwimarike yebhondi * Kutheni u-2021 Umceli mngeni kubatyali mali * Kutheni ixabiso lokushishina ngobugcisa obuphezulu kufanelekile ukubukela * Idizili Yeyiphi imiqondiso enokuthunyelwa yimarike kuqoqosho * Idabi kwimfazwe elandelayo yemoto yombane * Ngaba ukuthengwa okuhlawulelweyo kuyenyuka * Ngaba iibhondi zaseTshayina zikhuselekile njengeebhondi zikazwelonke * Ngaba lixesha lokuzama imarike yesitokhwe yaseThai Ngexesha lokubhala, umbhali ukwisitokhwe esingentla Akukho sithuba. Landela iBenzinga kwi-Twitter ngazo zonke iindaba eziphambili kunye nezorhwebo. Bona ulwazi oluthe kratya malunga neBenzinga * Cofa apha ukujonga ukhetho lweBenzinga kwintengiso yeenkomo zeBenzinga kule veki: iBoeing, iNetflix, iPfizer njl. * Ukufunyanwa kwangaphakathi kwiveki ephelileyo: iCarnival, iCitigroup kunye nokunye (C) 20 20 Benzinga.com. I-Benzinga ayinikezeli ngcebiso yotyalo-mali. onke amalungelo agciniwe.
Izitokhwe zeTrifecta ziya kuchonga isitokhwe se-bearish rhoqo ngoLwesithathu, kwaye kunokubakho amanye amathuba otyalo mali anomdla kwixesha elifutshane. Sisebenzisa uhlalutyo lobuchwephesha kwezi tshathi zesitokhwe, kwaye apho kufanelekileyo, ngokusekwe kwizenzo zamva nje kunye nomlinganiso weTheStreet's amanani, siwakhuphe la magama mahlanu. Nangona singazukuthathela ingqalelo uhlalutyo olusisiseko, siyathemba ukuba eli nqaku liza kubonelela abatyali mali abanomdla kwistokhwe ngesiqalo esihle sokuqhubeka nomsebenzi wasekhaya egameni.
Tshiza uthuthu elwandle okanye kwiigadi zokukhumbula ukulahla uthuthu ngendlela enobume bendalo kunye nokuzinzileyo. Cwangcisa kwangaphambili, yazisa usapho lwakho ngeminqweno yakho, kwaye ubhalise kwiRejista eyiNtloko yeMingcwabo eGreen.
Isigebenga semali yomhlala-phantsi i-PGGM iphindaphinde utyalo-mali lwayo kwistokhwe se-PayPal kunye nezabelo ezithengiweyo zeCisco kunye ne-Activision kwikota yesithathu. Isike isitokhwe sikaQualcomm.
Umsunguli we-Alibaba uJack Ma uthe ngoMgqibelo ukuba uluhlu lwamaqela e-Chinese fintech giant Ant Group luza kuba lukhulu kwihlabathi ngokusekelwe kumaxabiso abekwe ngoLwesihlanu ebusuku. Uthe kwiNgqungquthela yaseBund kwiZiko lezeMali laseMpuma eNew York: “Eli lixesha lokuqala ukuba amaxabiso ezinto ezikhulu kwimbali yoluntu amiselwe ngaphandle kweSixeko saseNew York.” Ngenkxaso ye-e-commerce enkulu yase-China u-Alibaba, u-Ant uceba ukuyidwelisa kwintengiso ye-STAR e-Hong Kong nase-Shanghai phakathi evekini.
I-PayPal ivula inethiwekhi yayo kwi-Bitcoin kunye ne-cryptocurrensets iyakutshintsha imigaqo yomdlalo, kodwa ezi ndaba zifihla umyalezo omkhulu kwaye ubaluleke ngakumbi.
I-Hang Seng entsha ehlawulwa kwirhafu ekwi-intanethi ibonelela ngeminyaka eli-10 yengeniso esisigxina eyongezelelweyo kwaye iqinisekisa i-1.73% -2% yerejista yangaphakathi engenisiweyo. Kuthatha kuphela malunga nemizuzu eli-10 ukufaka isicelo seinshurensi kwi-intanethi kwaye wenze kwangoko.
Isahlulelo kunye neenzuzo azisekho ezona zizathu zibalulekileyo zotyalo mali lokuthenga okanye lokuhlala kwiinkampani zeoyile. Nangona imbuyekezo iseyeyona nto iphambili, abatyali mali basafuna utshintsho ngaphambi kowama-2020
(Bloomberg) -KuLeon Black, izinto ziya zisiba mandundu. Kwiveki ephelileyo, inkampani enkulu yotyalo mali, Apollo Global Management Inc. (Apollo Global Management Inc.) bajongane nengxaki emva kwenye, oko kukuthi, yena kunye nomgwebi ogwetyiweyo ngokwesondo uJeffrey Epstein (Jeffrey Epstein) uMongameli ubudlelwane phakathi kwamashumi eminyaka. Ibhodi yakhe yabalawuli iyalele uphononongo lwangaphandle nguMnyama ngokwakhe. Ke ipenshoni yasePennsylvania yarhoxisa utyalomali olutsha-iConnecticut yenza okufanayo. Omnye wabacebisi abaphambili-umgcini-masango ozalisekisa isithembiso se-160 yezigidigidi kubatyali-mali-ababongoza abathengi ukuba babuyekeze, ngelixa omnye ecinga amanyathelo afanayo. Abathengi abonwabele eyona mivuzo iphezulu yeWall Street iminyaka baphinde baqwalasele ubudlelwane babo noApollo. Kwangoko kulenyanga, ingxelo kwiNew York Times ikhuthaze ukuvavanywa kwakhona kuka-Epstein. UMaxwell (Ghislaine Maxwell) akatywinwanga kwaye unikwa ingqwalaselo entsha. Ngokwabantu abawaziyo lo mbandela, abanye abathengi abakholelwa ukuba uphononongo olwenziwe yinkampani yamagqwetha iDechert LLP lwanele ukucoca igama likaMnyama, kwaye ukukhenkceza imali entsha kunokubangela ingozi kuApollo ngelixa izama ukuqhubeka. Nyusa i-20 yezigidigidi zeedola kwiimali ezintsha ezininzi. Isiphithiphithi esibangelwe ngubhubhani kwimarike yetyala lelona thuba liphambili lenkampani kutyalo-mali, elaziwa ngokuthenga amashishini aneengxaki. Abantu abawaziyo lo mbandela bathi ngo-Epreli u-Apollo ufuna ukuthatha ithuba lokuxhamla kwintengiso kwaye atyale ityala lakhe labucala. Iingxaki ezikhulayo zabamnyama zibonisa utshintsho kwezopolitiko kwilizwe lotyalo-mali, iimali ezinkulu ziba nemeko yokusingqongileyo nakuluntu. Kwaye ulawulo lubaluleke kakhulu. Ukugxila okutsha kuthetha ukuba nkqu naphakathi kwezikrelemnqa, nkqu nethemba lembuyekezo enengeniso ayinakuba nomtsalane ngokwaneleyo. "Nangona intsebenzo iyakuhlala iyinto ebalulekileyo, ayisiyiyo yodwa into, utshilo uGerald O'Hara, umhlalutyi eJefferies Financial Group Inc .." Ngeendlela ezithile, sikulungele ukuncama ukusebenza ukuze siqhube kakuhle kwaye inkampani yokuziphatha kakuhle. ” Bloomberg uxele ngolwe-Sihlanu ukuba umcebisi wotyalo-mali uAksia uxelele abathengi ukuba bangongezi mali kuApollo. IConnecticut ithe iyakuyekisa utyalomali kwinkampani. Kwangoko kule veki, iPennsylvania Public School Staff Retirement System ithe izakuxhoma okwethutyana utyalo-mali olongezelelekileyo eApollo, kwaye umcebisi weCambridge Associates uthathela ingqalelo ukungacebisi inkampani ukuba ipenshini kunye nabathengi bepenshini. Ngokuphathelele iindaba zokubanjwa kuka-Epstein kunyaka ophelileyo, amaxhala abatyali mali avuselelwe yingxelo yeNew York Times. Emva kokugwetywa ngokugaya intombazana ekwishumi elivisayo ukuba ibe ngunongogo ngo-2008, uye wathumela imali ezizigidi ezingama-50 ku-Epstein. Idola. Inqaku alizange limtyhole uMnyama ngokwaphula umthetho. Oko ibali lapapashwa nge-12 ka-Okthobha, ixabiso lesitokhwe sika-Apollo liwile malunga neepesenti ezili-12. "Sizibophelele ekuphuculeni ukwenza izinto elubala," utshilo u-Apollo kwingxelo yakhe ngolwesiHlanu, ephawula ukuba uMnyama unxibelelana nabatyali mali rhoqo. "Nangona u-Apollo engazange akhe enze ushishino noJeffrey Epstein, uLeon ucele ukuphononongwa ngokuzimeleyo kobudlelwane bakhe kunye noMnu. Epstein." Umnyama uxelele u-Apollo kule nyanga Ileta evela kwiqabane elinomda ithi uyazisola kakhulu ngokubandakanyeka kuka-Epstein. . Umnyama wathi uguqukele kuye ukuze ahlawule irhafu, acwangcise izindlu nomhlaba kunye nemicimbi yesisa, kwaye akukho nto kwingxelo yeNew York Times ephikisana neenkcazo zangaphambili zobudlelwane bakhe. Okungakumbi: Ikhonkco likaLeon Black's Epstein kwiphulo lokunyusa ingxowa mali elisongela u-Apollo Abatyali banqunyulwe ngokupheleleyo e-Apollo kuba iimali zabucala ezizimeleyo zihlala zitshixa imali iminyaka emininzi-abantu abaninzi bakulungele ukufumana imbuyekezo ephezulu phantsi kwesiseko sobunzima. Abatyalomali abathathu, abangafunanga kuchazwa amagama, bathi ngaphandle kokuba iziphumo zophando zibaxekile, abathengi banokukhetha ukujonga kwenye indawo. Ukujonga ukubuya kwenkampani ngesisa, ukurhoxa kwabathengi kunomdla ngokukodwa. I-Bloomberg yaxela ngoJanuwari ukuba i-Apollo's flagship fund equity fund yavulwa kubatyali mali ngo-2001, ngesivuno esingama-44%, kodwa nabo batyale imali abazimiseleyo ukutyala imali engaphezulu kwiimali zabucala bayakubuya ngoMeyi bakhethe ukuyidlulisela kwabanye iindawo. Iqabane uSarah Sandstrom (uSarah Sandstrom) uthe: “Olu lukhuphiswano olukhulu lwenkunzi, kwaye siyaqhubeka ukubona into kwinkqubo yokuqokelela imali. Into, ngeendlela ezininzi, ingaphezulu kwenkqubo yezopolitiko, hayi inkqubo yokufumana imali. ” KwiCampbell Lutyens, inkampani inceda iifem zabucala ezinyusa imali. "Ubalisa ibali lakho kwaye wakha ubudlelwane nabatyali mali." (Wongeze uluvo lukaBlake lwangaphambili kumhlathi we-12.) Kula manqaku, nceda undwendwele iBloomberg.com kwaye ubhalise ngoku ukuze ufumane eyona mithombo yeendaba ithembekileyo. © 2020 Iirekhodi zeBloomberg
Umhlala-phantsi usenokungabi yinkxalabo kulutsha oluninzi, kodwa kufanelekile. Kungenxa yokuba emva kwamashumi eminyaka yokudityaniswa, utyalo-mali oluncinci namhlanje lunokunyuswa lube sisixa esikhulu kwixesha elizayo. I-Roth IRA yindawo efanelekileyo yokuqala.
Ixesha Post: Oct-26-2020
Iminyaka eli-12 yamava oRhwebo lwaMazwe ngaMazwe
Ishedyuli yokuHanjiswa kwexesha echanekileyo
Ukuqwalaselwa kweNkonzo yokuThengisa emva
Igumbi A328, Kechuang Pioneer Park, District Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, China
Eyona zibuko zelanga zibalaseleyo, ibhatyi, i-sneaker ...
Uqikelelo lwe2025: Ingxelo kwezemidlalo B ...
Zeziphi iintlobo zelanga ozifunayo kuthi ...
Ngaba usakhetha umjikelo wesiko ...
Ngokoluvo oludumileyo, iiglasi zelanga zi-R ...